Ao amin'ny kolontsaina Sinoa, dia fivoriana ny ray aman-dreniny ny zazavavy iray foana ny famantarana fa ny fifandraisana no lehibe. Video Mampiaraka
Ao amin’ny kolontsaina Sinoa, dia fivoriana ny ray aman-dreniny ny zazavavy iray foana ny famantarana fa ny fifandraisana no lehibe. Video Mampiaraka
izy dia nihevitra indray ny maha-coy momba ny fifandraisana ary mihevitra ianao roa miaraka sy mandray anao ny mahita ny ray aman-dreniny ho toy ny fofombadiny. Izany fisehoan-javatra dia tena inoana raha izahay mba mino ianao fa efa mazava tsara ampitaina amin’ny azy fa tsy niaraka, ary tsy izany no tantaram-pitiavana fifandraisana, toy ny hoe eo amin’ny mazava Sinoa teny amin’ny endriny fa izaho tsy niaraka anao izahay, ary ianao no tsy eo amin’ny fifandraisana, ny Fandinihana ny an-trano an-tanàna kely iray tanàna (amin’ny kely aho hoe tsy Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chongqing), izy no inoana fa tena ambany be dia be ny fanerena mba hanambady. Ary raha izy no t te-hahazo an-fifandraisana amin’izao fotoana izao, dia mety mampiasa ny hamangy mba hampitoniana ny ray aman-dreniny nanorisory. Izy dia manasa anao an-tranony mba hanome azy ireo ny fahatsapana fa izy s mampiaraka olona avy any ivelany, dia tsara mendrika ny tovolahy iray amin’ny lehibe ho avy. Noho izany, ny ray aman-dreniny dia mety ho azy irery nandritra ny fotoana kelikely. Izy tsy afaka ny tsy marina avy milaza aminareo fa izy no mampiasa ianao mba hanao toy ny olon-tiany, iza no mahalala, mety diso fandray azy io, ary raha ny marina dia te-hanana fifandraisana na ho tafintohina noho ny maha-fitaovana. (fa, hanome kely fotsiny fototra, fandraisana mpiasa avokoa ny zatovolahy ireo mba hanao toy ny sipa manoloana ny ny ray aman-dreny, raha ny marina dia nanolotra asa fanompoana ao Shina. Tsy azoko antoka raha ny ankizivavy raha ny marina mampiasa ny olon-tiany ny karamany, fa tsara tarehy aho antoka ankizivavy sasany handainga amin’ny ray aman-dreny mikasika ny namana lehilahy toy izany koa ny ray aman-dreny dia mijanona nanorisory azy ireo momba ny mahazo manambady), dia te-hanasa ny namany ho any an-tranony, raha toa ianao indray fotsy (na ny tsy Sinoa), dia angamba te-hampiseho anao eny, toy ny namana tsara efa ao an-tanàn-dehibe, dia te-hampiseho aminao ny fotoana tsara sy ny fianakaviany, angamba ny ray aman-dreny dia lehibe ny mpahandro. Izany dia mety ho tena tsotra namana sakafo ao amin’ny fianakaviana ary na inona na inona intsony. Ao amin’ny kolontsaina, hitondra sipa sipa-hihaona amin’ny ray aman-dreny no tena zavatra lehibe. Midika izany fa isika dia te-ho azo antoka ny ray aman-dreny dia afaka ny hanaiky anao ny vadiko vadiny. Noho izany, ny olon-tiany dia ny lehibe, ary izy dia tia anao.
AZAFADY. Miresaka aminy, miteny aminy ny trues sy milalao intsony ny tsy mazava！ Dia izy no mampahafantatra anao ny reniny toy ny olon-tiany, na amin’ny maha-namana? Raha ny s ny teo aloha, eny fa angamba no lehibe. Saingy, efa niezaka nanontany azy? Izany dia hanome anao mivantana kokoa valiny noho ny olon-kafa ao amin’ny Lahatsary Mampiaraka. Avy amin’ny famaritana, izany dia tena mazava fa samy vao manomboka ny fifandraisana, ary izany no fomba ela loatra ho an’ny ankizivavy Shinoa mba handrebirebena ny hevitra ny fanambadiana. Koa, ny zavatra niova tao ny antontan’isa haingana ao Shina. Ny sakafo hariva amin’ny ray aman-dreny dia tsy misy intsony ny fotoan-dehibe ao amin’ny fifandraisana toy izany dia nampiasaina mba ho (angamba any amin’ny faritra ambanivohitra sasany fa tena tsy an-tanàn-dehibe, indrindra fa ny avy any ivelany sipany). Inona no mety ho mitranga ao amin’ny zazavavy s lohany dia rakotra tanteraka amin’ny Feiffer Wang ka tsy handeha aho mba avereno. Na izany aza, raha maka ny toro-hevitra avy eo aho dia mila hilaza anao bebe kokoa. Mety ho hafahafa mba hiara-misakafo amin’ny olona izay tsy t dia miteny ny fiteny. Noho izany, dia ho hitanao ny zazavavy s ray aman-dreny mitsiky ankapobeny isaky ny miteny ianao. Miteny avy amin’ny zavatra niainako, dia mety ho ratsy ny sakafo hariva eo amin ny fiainanao noho izany.
Aho Sinoa, raha toa izy ka mangataka anao mba manana sakafo hariva tao an-trano niaraka tamin’ny ray aman-dreny, izay midika izy mieritreritra ny momba ny fanambadiana ianao. Raha vao manana sakafo hariva miaraka amin’ny reniny, angamba fotsiny ny reniny te-hahita izay karazana olona ianao, ary hiaro ny zanany vavy avy maratra. Na izany aza, ny ankamaroan’ny Shinoa ny ankizivavy no tena matotra ny fiarahana. Tsy mora ny mangataka azy ireo. Ary indray mandeha izy dia nanaiky ny mifanerasera aminy ianao ho an’ny sakafo hariva na ny fijerena sarimihetsika ho an’ny mihoatra ny fotoana, dia tena azo inoana fa izy dia mandray anao ho toy ny olon-tiany.
Raha ny sipa dia manasa anao mba hihaona amin’ny ray aman-dreniny, izay midika fa izy te-hampiditra ny olon-tiany ny ray aman-dreniny tamin’ny fomba ofisialy, ary izy koa te-ho azy ny ray aman-dreny ny manome anao ny tsara fankatoavana. Koa izany no famantarana fa ny olona dia vonona hanambady amin’ny ho avy. Raha te-hanorina bebe kokoa ny fifandraisana aminy, manoro hevitra anareo aho hitondra fanomezana ho an’ny ray aman-dreniny. Tsara, raha mbola misalasala momba ny fifandraisana, izaho dia manoro hevitra anao lazao azy fa mbola tsy fotoana ny mahita ray aman-dreniny
← Fomba Hahazoana ny Bandy Mahita Anao tao amin'ny Club - China Mampiaraka ny Lahatsary amin'ny Chat
Korea ara-Tsosialy fampiharana ho an'ny chat, Mampiaraka, koreana →